'IGehena: Lapho Kufa khona Ukufa' - I-Indie Horror Movie iyiMphumela Wobuciko Ongokoqobo - iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo 'IGehena: Lapho Kufa khona Ukufa' - Indie Horror Movie iyi-Practical Effects Masterpiece
'IGehena: Lapho Kufa khona Ukufa' - Indie Horror Movie iyi-Practical Effects Masterpiece
by admin Mashi 26, 2015
ebhalwe ngu admin Mashi 26, 2015
Kufanele ubone lokhu! Ngenkathi ngibulala isikhathi ngenza umqulu wami wamasonto onke weKickstarter (KS) amehlo ami amiswa ngokushesha kuphrojekthi ebizwa ngokuthi IGEHENNA: Lapho Ukuphila Kuhlala Khona. Mhlawumbe bekuyisithombe esesabekayo sesidalwa esinciphile somuntu, noma amagama asetshenziswe ezitatimendeni zokuqala abambe isithakazelo sami, anginasiqiniseko. Okubonakele kimi kusuka ekuhambeni, ukuthi lokhu akuyona iphrojekthi yakho ejwayelekile ye-KS.
Lapha emahhovisi eHorror.com, iqembu lezigelekeqe lizoxoxa ngamaphrojekthi amasha axhaswa yizixuku nsuku zonke. Ngokuyinhloko kungenxa yokuthi ukwesaba uhlobo oluvelele kule mibuthano futhi phela basinika ama-movie afana nalawa I-Babadook. Ngeshwa, kunenqwaba yama-dud emiphakathini eshiwo engaphumeleli. Kepha ngiyakholwa IGEHENNA: Lapho Ukuphila Kuhlala Khona izokwenza uphawu emhlabeni owesabekayo. Izikhulu ezinkulu zomkhakha ezingakaze zikhathazeke ngale ndoda encane kufanele zinake le nhlangano ezayo nabenzi bama-movie.
Ubuchopho ngemuva kwakho konke nguHiroshi Katagiri (isithombe esingenhla) futhi uyinganekwane emhlabeni wemiphumela ebonakalayo; ukuhlanganisa ukubaza, ukwakheka, nemiphumela yakudala esikrinini ukuze uthole umphumela "wokuthengisa kunokoqobo". U-Katagiri, esebenze njengomuntu okhethekile wemiphumela kuma-movie anjenge Imidlalo Ye-Hunger futhi Cabin ehlathini (bheka isithombe ngenhla), nokuhlikihla izindololwane ngezinganekwane ezinjengoSteven Spielberg, uzizwa ngokusobala ukuthi yisikhathi sakhe sokuhlala esihlalweni akhombise ontanga bakhe ukuthi kwenziwa kanjani. Bheka eyakhe IMDb lapha.
Ngifunda ngokuqhubekayo emininingwaneni yephrojekthi ku-KS, ngijabule ngenye into encane. Kusobala IGEHENNA: Lapho Ukuphila Kuhlala Khona yi-movie esabekayo enemiphumela emihle ebonakalayo - okusho ukuthi izidalwa zohlobo oluthile, futhi ngubani ongcono wokufaka izici zesidalwa esinjalo? Akekho omunye ngaphandle UDoug Jones! Ngingumlandeli omkhulu womsebenzi kaDoug futhi uma ungazi ukuthi ngikhuluma ngobani, yihlazo kuwe, njengoba uqinisekile ukuthi isihogo besizobona isidalwa asidlalile. Ungene I-Pan's Labyrinth, i-Hellboy, i-Fantastic Four, Amadoda e-Black 2, futhi uhlu luyaqhubeka.
(Isithombe ngenhla nguMike Elizalde, umnikazi weSpectral Motion, osebenza kuJones njengeThe Creepy Old Man, njengoba uHiroshi ebuka. UMike noSpectral Motion bobabili bagcwele le filimu.)
Ekugcineni, icebo lale filimu lizwakala lingokoqobo, hhayi ukujija okuthile esesikubonile. Uma ubheka amakhasi e-bio kaHiroshi, ubamba ngempela ukuthi yini eyenza i-movie enhle futhi okubaluleke kakhulu ukuthi yini okwenza ithuse. Futhi ucacile ephuzwini lokuthi AKUFUNI ukudonswa ngokweqile nangobunyama ukwethusa abantu, esikhundleni salokho, ucwilisa izethameli zakho endabeni ngokusetshenziswa kwamasu wendabuko; ukwethuka kuzovela emandleni akhe okuletha izidalwa zakhe empilweni ngemiphumela ebonakalayo, hhayi amakhompyutha.
Ngokwami, ngemuva kokufunda imininingwane ekhasini leKickstarter ngijabule ukubona ukuthi yini eyenziwe ngale phrojekthi. Ngabasekeli abangamakhulu ambalwa asebevele anginakungabaza ukuthi izofinyelela umgomo wayo. Uma ungathanda ukuba yingxenye kaHiroshi nokwakhiwa kweqembu, yisa imbongolo yakho ku Ikhasi le-KS bese ubuyisela iphrojekthi. Ungathola isithombe esenziwe ekhanda lakho esenziwe nguHiroshi uqobo.
NgoLwesihlanu oluzayo umhla ka-13 Uthola uNick Antosca njengoNobhala kaHannibal
Idokhumentari Ihlola Izincwadi Ezijwayelekile 'Izindaba Ezesabekayo Ukuzixoxa Ebumnyameni'